Feral Inopindirana iri kubvunza zvakare ndeapi mavhidhiyo emitambo iwe aunoda kuendesa kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Feral Inopindirana iri kubvunza zvakare ndeapi mavhidhiyo emitambo iwe aunoda kuendesa kuLinux
Aka hakasi kekutanga kuzviita. Iyo vhidhiyo yemutambo inovandudza Feral Inopindirana yakabvunza vashandisi zvakare mitambo yemavhidhiyo yavanoda kuve nayo paLinux. Kana iwe ukaverenga isu kazhinji, iwe unozoziva kuti Feral yakaratidza akati wandei akakosha uye anozivikanwa mazita eLinux neMacOS. Uye icharamba ichiita saizvozvo pakuonekwa kwayo, saka studio ichadzokera kubasa kuunza mimwe mitambo kuLinux.
Izvozvo zvaunofunga ichave iyo yavanoshandisa kune avo anotevera madoko. Zvirokwazvo iwe unorangarira kuti munguva yakapfuura ivo vakaparura THE REQUESTINATOR, uko kwavakabvunza nezve izvi pane zvepamutemo social network zvekambani, senge paTwitter. Uye chave chiri ichi chimwe chikuva chavakashandisa izvozvi kubvunza zvakare, zvakare kune macOS uye nhare mbozha. Kunyanya ivo vakazviita neiyi tweet:
«Ndeupi mutambo wevhidhiyo waungade kuona uchiendeswa kune macOS, Linux, kana nhare mbozha muna 2020? uye nekuti? Pane here mutambo uine imwe yekuwedzera inoda kutakura? Tiudze kuti nei zvingave zvakakwana pane yako yaunofarira chikuva uye mhinduro yako inogona kuoneka mune yedu inotevera tsamba. https://feralinteractive.com/xx/register/»Kana iwe uchida kutora chikamu, iwe unotoziva zvaunofanirwa kuita… uye kana iwe uchida kuramba uchiziva nezvazvo nenhau dzeFeral Inopindirana, usazeze kuvatevera kuburikidza nevezvenhau vepamutemo.
Unoziva chii Feral yakatakura yakanaka yakati wandei yemazita emazita yeLinux, senge Alien Isolate, Hupenyu Hwakashamisa, Pamberi peDutu, Mad Max, Yakazara Hondo; Humambo hutatu, XCOM, Tom Raider, Fomula 1, nezvimwe. Nekuti ivo havamire, nerombo rakanaka kune ese linuxers uye ma gamers. Parizvino, mamwe emazita anogona kuve makwikwi akakomba kuti auye kuLinux natively anogona kunge ari Monster Hunter: Nyika, Dragon Ball Z: Kakarot, uye Borderlands 3. Uye iwe? Ndeupi waungade kuti vatorere yako yaunofarira GNU / Linux distro?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Feral Inopindirana iri kubvunza zvakare ndeapi mavhidhiyo emitambo iwe aunoda kuendesa kuLinux
Zera reMambo II !! Ini handikwanise kunyatso gadza pane linux ..
Kana kuendesa kunoreva kuisa iyo isina kukwana rukoko mairi iyo pamaawa maviri inopa chikamu chechikanganiso uye ichivhara mutambo, ini handina kana,
Ndinoziva kuti kurota asi kurota hakubatsiri chinhu. Ndinoda kuve neyekupedzisira fungidziro xv Linux edition
Chrome Apps dzakatoseta zuva rekupera. Ichave muna 2022
Kugoverwa kwakanyanya kutsiva yako Microsoft Windows 7